Tag: teknika linkbaiting
Fotoana famakiana: <1 minitra Ok, io lohateny io dia mety hamitaka kely. Fa nahasarika ny sainao izany ary nahatonga anao hanindry ilay lahatsoratra, sa tsy izany? Antsoina hoe linkbait izany. Tsy nahita lohateny fandefasana bilaogy mafana toy izany izahay raha tsy nisy fanampiana… nampiasa ny Generator Content Idea an'i Portent izahay. Ireo olon-kendry ao Portent dia nanambara ny fomba nahatongavan'ilay hevitra momba ilay mpamokatra herinaratra. Izy io dia fitaovana tsara iray izay mampiasa vola amin'ny teknikan'ny linkbaiting izay
Fotoana famakiana: 2 minitra Nanatrika hetsika lehibe iray aho omaly, antsoina hoe Summit Innovation, izay napetrak'i TechPoint monina any Indy. Clayton Christensen, ilay mpandahateny, mpampianatra ary mpanoratra avy ao amin'ny Oniversiten'i Harvard dia niresaka momba ny Innovation Disruptive ary nanao asa miavaka. Ny iray amin'ireo teboka nomeny tamin'ny ampahany farany amin'ny famelabelarany dia ny famaritana ny asa tokony hataon'ny mpanjifanao ny vokatrao na serivisinao. Nomeny ny ohatra iray amin'ny milkshake ary ahoana, amin'ny alàlan'ny